Burma Partnership » Coalition of 18 Community-based Social and Political Networks Release Findings of Public Opinion on Village Tract Administrative Laws
By Action Committee for Democracy and Development • December 7, 2014
Yangon, Burma (Myanmar) – Action Committee for Democracy Development (ACDD),acoalition of 18 community-based social and political networks, releasedareport presenting the findings ofasurvey of public opinion on the Ward and Village Tract Administrative Laws today in Yangon to members of political parties, Members of Parliament, civil society organizations and the media. The laws were approved on 24 February 2014 and 28 March 2012 respectively.
The report is based on interviews with 1634 people (594 women and 1040 men) from 72 townships across three States and six Regions in Burma (Myanmar) and offer findings and analysis on the level of public awareness towards the right to vote, and the level of freedom to exercise fundamental rights in electing local administrators.
According to Ye Kyaw Thu, one of the leaders of the networks, by exposing results of the survey to political parties, civil society and media, members are hoping to playacollective role as civil society and as citizens towards the debate on amending the 2008 Constitution.
“One of the objectives of the survey is to contribute to the amendment of the 2008 Constitution and playarole as people and as civil society organizations. We hope the survey findings will be an asset to the efforts to amend the constitution. We have learned that if we want to improve administration at village tract level, we have to amend the 2008 Constitution, particularly articles 288 and 289”, said Ye Kyaw Thu.
The report also explores the weakness of Union Parliament Law No (1/2012) Yard and Village Tract Administrative Law approved on 24 February 2012 and Union Parliament Law No (7/2014) Yard and Village Tract Administrative Amending Law approved on 28 March 2012. It argues that the laws are not in compliance with fundamental democratic principles.
“A major finding in the survey is that many people don’t even know that such laws exist. At times, we see tension rise between the authorities and local people when the appointed village tract administrators’ performance goes against the good of the people. The laws have weaknesses and implementation of the laws needs to be improved in many ways”, said Aung Myin,anetwork member and field survey team member.
ACDD isacoalition of 18 community-based social and political networks comprised of monks, members of ethnic minorities, youth, women, former political prisoners, farmers and fishermen. The release of the report marks the first publication of the coalition since it was founded in 2013.
For interviews please contact: Ye Kyaw Thu +95 (0)9452336380, Zun Pann +95 (0)944903465, Aung Myin +95 (0)9259038228 (Note: All contact persons will provide interviews only in Burmese but will have translators for interviews in English)
Download the full report in Burmese here
လူမှုရေးနှင့်နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းများ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသော ကွန်ယက် (၁၈) ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဒီမိုကရေစီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုကော်မတီ (Action Committee for Democracy Development – ACDD) သည် ၂၀၁၂ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နောက်ပိုင်းတွင် အဆင့်ဆင့်ပြဌာန်းအတည်ပြု အကောင်အထည်ဖော် ခဲ့သော ရပ်ကွက် (သို့) ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေနှင့်ပတ်သက်၍ စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပြီး စစ်တမ်းတွေ့ရှိ ချက်များအား ယနေ့နံနက်၌ ရန်ကုန်မြို့တွင် နိုင်ငံရေးပါတီဝင်များနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အရပ်ဘက် လူထုအဖွဲ့အစည်းများ၊ သတင်းမီဒီယာများနှင့်တွေ့ဆုံကာ ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့သည်။
အစီရင်ခံစာအား ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇွန်လနှင့်သြဂုတ်လကာလ အတွင်း ပြည်နယ်(၃) ခု၊ တိုင်းဒေသကြီး (၆) ခုအတွင်းရှိ မြို့နယ် (၇၂) မြို့နယ်မှ အမျိုးသမီး (၅၉၄) ဦးနှင့် အမျိုးသား (၁၀၄၀) ဦး၊ ပေါင်း (၁၆၃၄) ဦးတို့နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်း ချက်အပေါ် အခြေခံထားခြင်းဖြစ်ပြီး ပြည်သူများအနေနှင့် ၄င်းတို့၏ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို သိရှိခြင်းရှိ/မရှိ အနီးစပ်ဆုံးရှိနေသော အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအား ရွေးချယ်ရာတွင် နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကို အပြည့်အဝသုံးနိုင်ခြင်းရှိ/မရှိ စသည်တို့ပေါ် စစ်တမ်း ကောက်ယူ၍ အစီရင်ခံစာတွင် ဆန်းစစ်သုံးသပ် ဖော်ပြထားပါသည်။
ကွက်ယက်များအနေဖြင့် မိမိတို့၏ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု၏ ရလဒ်များအား သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးပါတီ အစုအဖွဲ့များ၊ အရပ်ဘက်လူထုအဖွဲ့အစည်းများ၊ မီဒီယာများအားတင်ပြခြင်းမှတဆင့် လက်ရှိ (၂၀၀၈) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွင် ပြည်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍကို စုပေါင်းအားထုတ်ဖော်ပြ လိုခြင်းဖြစ်ကြောင်း ACDD ကွန်ယက် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ရဲကျော်သူမှ ပြောသည်။
“ကျွန်တော်တို့ စစ်တမ်း ကောက်ခံရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး မှာ ပြည်သူတွေ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေ အနေနဲ့ တစ်ထောင့်တစ်နေရာက ပါဝင်ပံ့ပိုးချင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစီရင်ခံစာပါတွေ့ရှိချက်တွေက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက် တစ်စုံတစ်ရာ အကျိုးပြုနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အုပ်ချုပ်ရေးတွေမှာ တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေ ဖြစ်လာဖို့ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ၂၀၀၈ ဖွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတာတွေ့ရပြီး အဓိက ပုဒ်မ ၂၈၈ နဲ့ ၂၈၉ ကိုပြင်ဖို့လိုပါတယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
အစီရင်ခံစာတွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ပြဋ္ဌန်းခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် (၁/၂၀၁၂) ရက်ကွက် (သို့မဟုတ်) ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေနှင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ ၂၈ ရက်နေ့က ၎င်းဥပဒေကို ပြင်ဆင်သော ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် (၇/၂၀၁၂) တို့၏ အားနည်းချက်များ၊ ဒီမိုကရေစီ အခြေခံစံများနှင့် လွဲချော်နေမှုကို သုံးသပ်တင်ပြထားသည်။
“ကျွန်တော်တို့ အဓိကတွေ့ရတာကတော့ ကျေးရွာအဆင့်မှာ ပြည်သူတော်တော်များများဟာ ဥပဒေရှိမှန်းတောင်မသိ ဖြစ်နေပါတယ်။ အချို့ ဒေသတွေမှာဆိုရင်လဲ ကျေးရွာအဆင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေ ရွေးချယ်ခန့်အပ်မှုနဲ့ သူတို့တွေရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေက ကျေးရွာနေ ပြည်သူတွေရဲ့သဘောနဲ့ ဆန့်ကျင်နေတဲ့အပေါ် နှစ်ဖက်ကြားတင်းမာမှုတွေ ဖြစ်တဲ့အခါတွေလဲရှိပါတယ်။ ဥပဒေတွေမှာ အားနည်းချက်တွေရှိနေပြီး အကောင်အထည်ဖော်မှုပိုင်းကလည်း လိုအပ်ချက် တွေ အများကြီးရှိနေသေးတာ တွေ့ရပါတယ်” ဟု ကွန်ယက်အဖွဲ့ဝင်လဲဖြစ် ကိုယ်တိုင်စစ်တမ်းကောက်ခံခဲ့သူ ကိုအောင်မြင်က ဆိုသည်။
ACDD ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် စတည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် ရဟန်းသံဃာများ၊ တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုဝင်များ၊ လူငယ်များ၊ အမျိုးသမီးများ၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများ၊ လယ်သမားများနှင့် ရေလုပ်သားများဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်း ထားသည့် ရပ်ရွာလူထုအခြေပြုကွန်ယက်စုစုပေါင်း (၁၈) ခု စုပေါင်းထားသော မဟာမိတ်အဖွဲ့တစ်ခုအဖြစ် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်နေသည်။ ယခုထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာသည် ကွန်ယက်အဖွဲ့ဝင်များစုပေါင်းထုတ်ပြန်သော ပထမဆုံး အစီရင်ခံစာဖြစ်သည်။
အင်တာဗျူးအတွက် ဆက်သွယ်ရန် – ရဲကျော်သူ +၉၅ (၀)၉၄၅၂၃၃၆၃၈၀ ဇွန်ပန်း +၉၅ (၀)၉၄၄၉၀၃၄၆၅ အောင်မြင် +၉၅ (၀)၉၂၅၉၀၃၈၂၂၈ (မှတ်ချက် – ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်များသည် မြန်မာဘာသာဖြင့်သာ အင်တာဗျူးပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် အင်တာဗျူးပြုလုပ်လိုသူများအတွက် ဘာသာပြန် ထားရှိသွားမည်ဖြစ်သည်။
Tags: 2008 Constitution, Action Committee for Democracy Development, Union Parliament Law, Yard and Village Tract Administrative Law